RSS na Email: Ahịa Echiche | Martech Zone
RSS na Email: Echiche Ahịa
Ọ bụ mkparịta ụka na-aka nka, mana ọbịbịa nke Outlook 2007 na-akwado maka RSS - ụlọ ọrụ n'ịntanetị na-aga n'ihu na-atụnyere n'etiti RSS na email maka nkwukọrịta ahịa n'ịntanetị (yana SMS n'akụkụ akuku).
Site na njikwa njikwa ọdịnaya, ọtụtụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ na-eche ihe ndị a niile dị ka ụdị 'mmepụta'. Nke ahụ bụ echiche nzuzu. Ọ dị ka ile anya na Direct Mail na a Bulletin Board otu n'ihi na ị jiri otu otu ebe abụọ ahụ.
RSS na Email:
RSS bu teknụzụ 'na-adọpụta', ọbụghị 'na-agbanye'. Usoro nnyefe dị na mma nke ndị ahịa ọ bụghị ahịa. Dika odi, ichota oge ma obu ihu ihe gha adi nma ka ebunye gi site na ozi karie RSS. Ọ dị mfe iji tụọ ndị debanyere aha na wepu aha site na email, mana ọ naghị adị mfe na RSS belụsọ ma ịnwere 1 na 1 faili ntanetịime.
A na-agụkarị RSS na ntanetị, ebe HTML email ọdịnaya ọtụtụ sliced ​​n'ime ogidi. Ndị mmadụ na-achọ i toomi RSS site na elu ala, na-agụ isiokwu, isiokwu na ihe mgbọ - na-esi na ndepụta nri ngwa ngwa. Ihe odide RSS anaghị enwekarị 'n'elu atụrụ' ka onye na-achọ uche n'ihi na ndị folks ga-eji ọ gladụ gbadaa ogologo ya. Maka email, ọdịnaya nke ga-adọta uche gị kwesịrị ịdị na-ele anya tupu onye na-agụ gị hichapụ email ahụ.
RSS bụ mbipụta, ebe a na-emeso email dị ka ihe omume na ụlọ ọrụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-ere ahịa email na-ewepụta email kwa izu, ọ na-adịkarị gị ịnweta nsụgharị 52 nke email ahụ - otu maka izu ọ bụla. Ọ bụrụ na mmadụ kwenye na ndepụta RSS, ọdịnaya kwesịrị ịgbanwe ma ọ bụghị adreesị ndepụta. Edebere ọdịnaya ochie ma ọ dịghịzi adị ozugbo ebipụtara ọdịnaya ọhụrụ.
A na-ele RSS anya dị ka ihe ọkara. Ihe 1 ruo 1 site na RSS dị obere na ngwaọrụ ndị dị ugbu a adịghị eme mgbagwoju anya nchịkọta oriri oriri mgbe onye ọ bụla debanyere aha nwere adreesị ndepụta dị iche. Usoro dị ka FeedBurner nanị adịghị arụ ọrụ. Usoro nyocha na ESP nwere ike ịrụ ọrụ dị ukwuu maka nsuso ntinye aha maka ntinye - mana usoro maka ịkọ na data ga-agbanwe iji nye usoro 'mbipụta na mmemme' nke ndị na-eme emel.
RSS nwere nhọrọ, dị ka igosipụta naanị isiokwu, edemede, ma ọ bụ ndepụta zuru ezu. Nke a chọrọ ụfọdụ ọrụ aka ma a bịa n'ịdepụta otu maka nke ọ bụla - ịmata ụdị usoro ị ga-egosipụta.
RSS na-akwado mgbasa ozi dịka vidiyo na ọdịyo. Ọ bụ ezie na ọ ga-ekwe omume iwepu atụmatụ nchekwa na-egbochi ndị nọ na email, ndị ahịa email ọhụụ dị ka Microsoft Outlook agaghị enye edemede ma ọ bụ tinye aha.
Okwu na SMS
SMS (obere ozi site na ekwentị gị) bụ a dị iche iche na-ajụ. SMS nwere ikike iso ndị mmadụ na-emekọrịta ihe yana ịkwanye ha ọdịnaya. Nke ahụ dị nnọọ iche na RSS na email. Ndị na-ere ahịa ga-edozi otu ha ga - esi mee ike na adịghị ike nke onye ọ bụla - ma na oyiri, usoro, ikike, na nnyefe. Enwere ọtụtụ ohere iji bulie mbọ nkwukọrịta gị - ma enwere ọtụtụ ohere ịhapụ akara ahụ!
Na nkenke, ebula atụmatụ iji wepụta otu ozi ahụ site na ụzọ dị iche iche.
Tags: emailndepụtaRSSemails emailrss nrirss na emailSMS
Video: Ike Ike
5 Chọrọ maka Nchọgharị Ọrụ Opera
Bryan @ Otu Nwoke Mgbaru Ọsọ
Jul 24, 2007 na 6:53 PM
Achọpụtara m na ọ na-akụzi ihe nke ukwuu. M ka na-amụ banyere ọrụ ndenye aha ma nke a nyeere ụda!
Jul 24, 2007 na 8:49 PM
enwere otutu okwu banyere RSS na ahia email, nke m chere na ahia email gha adi ndu mgbe nile, ebe ichoro inweta ozi site na email ma obu site na ịdenye, nbudata, inye oru wdg.
Echere m na email ahá »‹ a bá »still ka ike - dá» ‹nná» á »wee kwụsị ndá» ‹a damn newbies from spamming 🙂
Jul 26, 2007 na 7:04 PM
Nwere ike nweta ezigbo kooky ma nwee FeedBurner tinye RSS gị site na email. 😉
Jul 27, 2007 na 5:14 PM
Akwa post Douglas. Anyị hụrụ email na RSS n'anya ma anyị hụrụ n'anya ịkwanye RSS site na email na ọrụ RSSFWD anyị n'efu (www.rssfwd.com).
Ezigbo ezumike sitere na esemokwu dị iche iche, yana ikike gị, omume njiri dị iche iche na mmasị maka usoro ọ bụla.
Ọrụ dị mma.